ILake Michigan: izici, imvelaphi, izitshalo nezilwane | I-Network Meteorology
IsiJalimane Portillo | 24/12/2021 10:00 | Ukwahlukanisa
El ichibi michigan ingelinye lamachibi amakhulu amahlanu aseNyakatho Melika. Lizungezwe amadolobha amaningana e-United States, elinye lawo elinegama elifanayo nelaleli chibi elimnandi, futhi abantu abangaphezu kwezigidi ezingu-12 bahlangana kulo.
Ngakho-ke, sizonikezela lesi sihloko ukuze sikutshele konke okudingeka ukwazi ngeLake Michigan, izici zalo nokubaluleka.
2 Izici Lake Michigan
3 sezulu Lake Michigan
4 Izitshalo, izilwane kanye ne-geology
5 Izinganekwane zaseLake Michigan kanye nezinto ezithokozisayo
ILake Michigan iyingxenye yeGreat Lakes ezimpambanweni zemigwaqo yase-United States naseCanada. Kodwa ingaphakathi ngokuphelele endaweni yase-United States. Ucwaningo lwemivubukulo luye lwabonisa lokho Leli chibi lakhiwa eminyakeni engaba ngu-13.000 XNUMX edlule, ngemva kwenkathi yokugcina yeqhwa.
Njengoba iqhwa lincibilika, uchungechunge lwezitsha ezinkulu ezigcwele amanzi zashiywa endaweni yazo, lezi zitsha, kanye nezinye izinto eziwuketshezi, zavela kuleli chibi, njengoba kwenza ezinye ezine eqenjini.
I-Lake Michigan iyichibi lesibili ngobukhulu eqenjini le-Great Lakes; Ngazithola sengihlangana neChibi iHuron eStraits of Mackinac, lapho amanzi alo ehlangana khona akhe amanzi ngokuvamile aziwa ngokuthi iChibi Huron, eMichigan. Kuyafaneleka ukusho ukuthi i-strait yayiwumzila obalulekile wokuhweba ngoboya ezikhathini zasendulo.
Ukujula kwaleli chibi kwabonwa okokuqala ngesikhathi sohambo ngo-1985, olwaluholwa usosayensi waseNyuvesi yaseWisconsin ogama lakhe lingu-J. Val Klump; ikwazile ukusebenzisa i-submersible ukwenza uphenyo ukuze kutholakale amamitha wayo angama-281.
Izici Lake Michigan
Izici zeLake Michigan yizona ezilehlukanisa kwamanye amachibi emhlabeni, ngalezi zici ungakwazi ukuqonda izici eziningi eziyisisekelo zechibi, phakathi kwamachibi Amakhulu likleliswe endaweni yesibili esikalini eMelika.
Ngalo mqondo, kungashiwo ukuthi iLake Michigan inalezi zici ezilandelayo:
Kuyichibi elitholakala ngokuphelele e-United States futhi Ingaphansi kwesifunda saseGreat Lakes.
Izungezwe ngabaseMelika i-Indiana, i-Illinois, i-Wisconsin, ne-Michigan.
Ihlanganisa indawo engamakhilomitha-skwele angama-57.750, enobude obungamamitha ayi-176 nokujula kwamanzi okungamamitha angama-281.
Ingamakhilomitha angu-494 ubude namakhilomitha angu-190 ububanzi.
Inochungechunge lweziqhingi ezimaphakathi nezwe ezibizwa ngokuthi: Beaver, North Manitou, South Manitou, Washington, and Rock.
Ithola amanzi emifuleni eminingana futhi ijoyine uMfula iSaint Lawrence endaweni yawo.
Amadolobha amaningana agxile ogwini lwayo, kodwa agqame kakhulu iChicago, iMilwaukee neMuskegon.
Ukudoba kwezemidlalo nokuhwebelana kwenziwa echibini, i-trout nezinye izibonelo ziyabanjwa, bese kwethulwa i-salmon.
Yatholwa ngo-1634 ngumhloli wamazwe waseFrance uJean Nicolet.
Kuleli chibi kwavela izindunduma zesihlabathi embozwe utshani obuluhlaza cherry beach, ngisho ngasekupheleni kwehlobo amanzi lapha epholile futhi esobala, futhi izinga lokushisa limnandi.
Kukhona amatshe e-Petosky eLake Michigan. Lezi yizikhumbuzo ezinhle ezivela echibini. Abhekwa njengamatshe asemthethweni echibini. Zihlobisa kakhulu. Zinokubukeka kwezinsalela zamathambo futhi ziqoshwe kahle kakhulu. Zihlukile endaweni futhi zingaphezu kuka-3. Iminyaka eyikhulu namashumi amahlanu ubudala.
sezulu Lake Michigan
Leli chibi elihle futhi kunconywa ukuthi ulivakashele ikakhulukazi phakathi kukaJuni noSepthemba, njengoba isimo sezulu siyashisa futhi siguqubele ngokwengxenye kulezi zinsuku, nakuba ubusika bubanda kakhulu. Izinga lokushisa kule ndawo ngokuvamile liyahluka phakathi kuka -7 ° C no-27 ° C; futhi lezi zindinganiso azivamile ukushintsha kakhulu, uma kwenzeka, ngeke zifinyelele -14 ° C noma zidlule ku-30 ​​° C. Kodwa iqiniso lamanje lihlukile, njengoba amazinga okushisa aphansi njenge -45 ° C aqinisekisiwe, okubangela ukuthi amanzi eLake Michigan aba yiqhwa.
Amanzi aso abhekana nalokho okubizwa ngokuthi umphumela wechibi: ebusika, umoya ubangela ukuhwamuka ukuze kukhiqizwe iqhwa, kodwa kwezinye izinkathi zonyaka, lapho emunca ukushisa futhi epholise umoya ehlobo nasekwindla, abuye alawule izinga lokushisa. Lokhu kuvumela ukubonakala kwamabhande ezithelo, okuyisikhathi lapho inani elikhulu lezithelo lingavunwa libheke ezindaweni eziseningizimu.
Izitshalo, izilwane kanye ne-geology
Njengamachibi amaningi, isici se-geological of Lake Michigan siwukuthi kukhona ukucindezeleka emhlabathini, lapho amanzi eqoqwa khona emifuleni eminingana; Ngaphezu kwenani lamaminerali anjenge-iron, la maminerali kamuva athuthelwa eziNtabeni Zase-Appalachian. Kusukela ezindaweni ezikhiqiza amalahle.
Ukwakheka kwenhlabathi yendawo kuyenza inothe ngokukhiqizwa kokudla ngoba ivunde kakhulu futhi inamahlathi amakhulu. ILake Michigan libonakala ngokuba khona kwamaxhaphozi ahlaselwe amanzi; kunotshani obude, ama-savanna, nezindunduma zesihlabathi ezinde, konke okwenza kube izindawo ezinhle kakhulu zokuhlala izilwane zasendle.
Ngalo mqondo, izilwane zayo zimelelwa izinhlanzi ezinjenge-trout, i-salmon, i-snook ne-pike perch, zonke zilungele imisebenzi yokudoba yezemidlalo. Kukhona futhi i-crawfish, izipontshi, izibani zasolwandle, izinkozi nezinye izinhlobo eziningi zezinyoni ezifana amadada, amahansi, amagwababa, amadada, amanqe, oklebe nokunye, njengoba leli chibi linengcebo enkulu yezilwane zasendle.
Izinganekwane zaseLake Michigan kanye nezinto ezithokozisayo
Ngokusho kwe-ejensi yezokuvakasha i-Travel & Leisure, iLake Michigan lizungezwe umlando ofana neLoch Ness eScotland, lapho kuthiwa kukhona i-monster enochungechunge lwezimpawu zangaphambi komlando otholakale unesibopho sokuhlinzeka ngezinsizakalo zezivakashi esifundeni. kusukela ngo-1818.
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi lesi silo esikhulu esifana nenyoka empeleni, njengoba kuchaziwe, akusona esangempela, ngoba akekho oke wasondela kuso, noma okungenani akekho oke wasithwebula ngokuqinisekile, ngakho-ke lokhu kubhekwa njengengxenye yenganekwane ukuthi izakhamizi zase indawo enehaba ukuheha ezokuvakasha.
Ucabanga ukuthi kukhona izilo eLake Michigan noma cha, leli yithuba elithokozisayo lokuhlangana naye futhi uthathe iholidi, ngoba ungakwazi ukubhukuda emanzini alo, ujabulele usuku lokuphumula ehlathini noma ufunde nje ngakho. Kubathandi beqhwa nobusika, le ndawo iba yiqhwa ngalesi sikhathi sonyaka, ukuze ukwazi ukuzilolongela imidlalo yasebusika njengokushushuluza.
Ngethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda okwengeziwe ngeLake Michigan nezici zalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » ILake Michigan